किनमेल लामो प्रेमीहरूलाई त, अन्तर्राष्ट्रिय छ फैशन वस्तुहरू अब खरिद कुनै पनि देशमा कुनै पनि भण्डारमा निरपेक्ष बनाउन सक्छ। मिति, धेरै लोकप्रिय Outlets जहाँ तपाईं वयस्क र बच्चाहरु उस्तै लागि लुगा र जुत्ता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ गर्न। विशेष मा, स्थानीय र पर्यटक रूस देखि Barberino डिजाइनर आउटलेट मा परे। यो फ्लोरेन्स (इटाली) मा स्थित छ र प्रस्तुत therein ब्रान्डहरु को संख्या युरोप मा सबै भन्दा ठूलो व्यापार मञ्चहरूमा संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।
डिजाइनर आउटलेट "Barberino" कम्पनीहरु McArthurGlen को एक समूह बुझाउँछ। यो सेवा गुणस्तर पूरा सबै आधुनिक आवश्यकताहरु भन्ने हो। यो एक सुन्दर सेटिंग मा Barberino डिजाइनर आउटलेट, फ्लोरेन्स बाट टाढा छ। को आउटलेट इलाका सबै बाहेक सुरम्य परिदृश्य गर्न थप भन्छन् जो Seve भनिने नदी छ।
आफैमा, किनमेल केन्द्र अनिवार्य गाउँमा पसलहरूमा, एकल-मंजिल्ला र दुई-मंजिल्ला भवन मा स्थित हो जो एक सेट छ। इटालियन शैलीमा पुरानो सडक को reminiscent सम्पूर्ण आउटलेट को भाग मा। क्षणमा, Barberino डिजाइनर आउटलेट विस्तार गरिएको छ: किनमेल केन्द्र निर्माण पूरा गर्न साथ नदी धेरै पसलहरूमा घरों।
अपरेटिङ मोड आउटलेट "Barberino" एकदम आगंतुकों लागि सुविधाजनक छ। हप्तादिन मा काम गर्ने दिन मा 10 AM सुरु र 8pm मा समाप्त हुन्छ। किनमेल लागि अलि बढी समय मल9बजे बंद को रूप मा, सप्ताह मा उपलब्ध छ।
फ्लोरेन्स देखि बस 30-40 मिनेट Barberino डिजाइनर आउटलेट छ। कसरी बस त्यहाँ प्राप्त गर्न? कर्पोरेट बस (वा, यो भनिन्छ रूपमा, शटल) को "Barberino" आगन्तुकहरूलाई दुई पटक एक दिन वहन। मा 10 AM पहिलो उडान र दोस्रो - 14.30 मा। ल्याण्डिङ स्थान - टाढा छैन "बाटा" भण्डारबाट, रेल स्टेशन को क्षेत्र को वरपर मा रोक्न। फिर्ता फ्लोरेन्स पनि 13,30 र6बजे मा आउटलेट देखि जान्छ कि एउटै शटल द्वारा पुग्न सकिन्छ।
यात्रा को लागत लागि, यो वयस्क 15 यूरो खर्च हुनेछ छ, 16 मुनिका बच्चाहरु - 8 यूरो, र बच्चाहरु को लागि माथि 14 वर्ष निःशुल्क यात्रा। सुविधाजनक, यो अग्रिम टिकट खरिद गर्न आवश्यक छ - तिनीहरूले बस मा किन्न सजिलो छन्। यसलाई सार्वजनिक परिवहन वा आर को "गाउँ" मा / W परिवहन त्यस टिप्पण लायक छ पुग्यो छैन।
Barberino डिजाइनर आउटलेट आफ्नै कार संग एक यात्रा योजना सबैभन्दा सुविधाजनक तरिका हो। आउटलेट ठेगाना: Via Meucci, 50031 Barberino di Mugello FI। फ्लोरेन्स देखि छोड्दै, यो, बोलोग्ना तिर राजमार्ग A1 चयन गर्न त Barberino di Mugello मा र्याम्प तल जाने भन्दा राम्रो छ। यो मुद्दा मा नेभिगेटर मुख्य प्रवेश गर्न ड्राइव कुनै समस्या र पार्किङ धेरै मा हुनेछ।
कुल मा, Barberino डिजाइनर आउटलेट ब्रान्डहरु 130 भन्दा बढी पसलहरूमा को समतल मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन्। इलाका आउटलेट थप गर्न रूपमा आफ्नो नम्बर, बिस्तारै वृद्धि। जहाँ तपाईं कुराहरू केल्विन क्लेन, Geox, Puma, Timberland, Benetton, रिचमन्ड, पोलो राल्फ लरेन, Pupa, प्रादा, Harmont Blaine, डिजेल, बोस र धेरै अन्य जस्ता ब्रान्डहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्ण सबैका लागि आउटलेट बुटीक मा उपस्थिति तपाईं कुनै पनि उमेर को व्यक्ति एक सफल खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। केन्द्र मा सही कुरा पत्ता लगाउन, र खेल शैली र क्लासिक, र connoisseurs हुनेछ स्मार्ट आकस्मिक। बुटिक पनि विवाह र साँझ कपडे सहित वस्त्र, जूता, सामान, हैंडबैग को एक विस्तृत श्रृंखला घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै आउटलेटहरू को नेटवर्क भर रूपमा McArthurGlen समूह, Barberino डिजाइनर मा आउटलेट विभिन्न उत्पादनहरु मा महत्वपूर्ण छूट प्रदान गर्दछ। दिन वा बिक्री छूट को प्रचार अवधि 70 प्रतिशत पुग्न सक्दैन। विशेष गरी रूसी संघ देखि पर्यटकहरु ब्रांडेड वस्तुहरू र किफायती मूल्यहरु को एक ठूलो चयन उत्थान हो को रूप मा, आउटलेटहरू मा बिक्री को दिन पनि सम्बन्धित छन्। यसलाई युरोपेली देशहरूमा सुशील निजी किनमेल पर्यटन भएको छ। शीर्ष दस आउटलेट, जहाँ तपाईं "स्टक अप" गुणस्तर कुराहरु "Barberino"।
समूह भ्रमणहरू, जसको लागि त्यहाँ विशेष कार्यक्रम हो पनि छन्। यसरी, प्रत्येक सदस्य दस प्रतिशत, या त एक मनपर्ने बुटीक मा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसको लागि छुट कार्ड प्राप्त गर्न सक्छ। मात्र अवस्था - पूर्व-किताब (को आउटलेट मा कम्तीमा 72 घण्टा पूर्व आगमन गर्न) एक समूह यात्रा गर्न, समय तयार गर्न अनुमति छ छुट कार्ड र सबै आवश्यक जानकारी।
साथै, अन्य देशका पर्यटकहरु कर फिर्ता गर्न मौका छ। यो गर्न, तपाईँले पहिला जो कर फिर्ता मतलब कर फिर्ता, भन्दै चिन्ह भण्डारमा त्यहाँ छ कि छैन भनेर ध्यान गर्नु पर्छ। त्यसपछि खरिद पछि विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले प्रस्तुत भएको एक विशेष जाँच जारी गर्न अनुरोध संग नगद रजिस्टर लागू गर्न। मुद्रा विमानस्थलमा सीधा कर फिर्ता कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ।
त्यहाँ धेरै वेब किनमेल गर्न समर्पित साइटहरूमा पाउन सकिन्छ जो Barberino डिजाइनर आउटलेट मा फरक राय, समीक्षा हो। मूलतः आगंतुकहरुलाई आउटलेट फ्लोरेन्स र बोलोग्ना त्यहाँ प्राप्त गर्न सुविधाजनक छ देखि, आफ्नो स्थान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। खरीदारों पनि सुरम्य प्रकृति, पसलहरूमा र बुटिक एक गाउँ घेरिएको छ सौन्दर्य जो द्वारा प्रोत्साहित गरिन्छ। यहाँ तपाईं क्याफे सही कुरा कफी वा एक कप चिया पिउने लागि थकित खोज पछि आराम गर्न सक्छन्।
साथै, त्यहाँ हट र सूर्य मा इटालियन कार कडा अप हीटिंग छ जब गर्मी महत्त्वपूर्ण छ जो एक ढाकिएको कार पार्क, छ। आउटलेट "Barberino" मा अन्य के फाइदा? जहाँ तपाईं, गतिविधिहरू विभिन्न ग्राहकहरु त्यहाँ जानकारी केन्द्र सल्लाह प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ सुविधाको लागि फैंसी दल, प्रस्तुति, वर्तमान रुझान मा सेमिनार, प्रशिक्षण शैली, प्रत्यक्ष संगीत संग कन्सर्ट प्रदर्शन, चाडहरूमा, आदि सहित भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ किनमेल साथै .; धेरै भाषाहरू बोल्ने विनम्र कर्मचारी, चलिरहेको, खेल को मैदानों लाग्यो।
वैज्ञानिकहरूले नाम9कारक पागलपन को जोखिम वृद्धि
आफ्नै हातमा देश मा बेड बनाउने
नुस्खा स्नातक: saury को कान
जो तपाईं थाहा थिएन योग को लाभ,
"ला Sylphide" ब्यालेट। Libretto ब्यालेट प्रदर्शन
शिशुलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ: युवा आमालाई सल्लाह दिनुहोस्
जीवनी पत्रुस Chernyshov - skater, प्रस्तोता र विभिन्न शो को सहभागी
रूस, युक्रेन र बेलारुस मा एक फुटबल एजेन्ट कसरी बन्न